China MS လျှပ်စစ်ဖိအားမြင့်စင်ကြယ်သောရေ centrifugal pump စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ | Tongke
MS အမျိုးအစားရေစုပ်စက်သည်သန့်ရှင်းသောရေနှင့်အစိုင်အခဲဘောဇဉ်ရှိသောတွင်းတွင်းရှိကြားခံအရည် - ၁.၅% သယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်။ အသေးစိတ် <0.5mm ။ အရည်၏အပူချိန်သည် ၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မကျော်လွန်ပါ။ အရည်၏အပူချိန်သည် ၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မပိုပါ။ စုပ်စက်များသည်မိုင်းများ၊ စက်ရုံများနှင့်မြို့ကြီးများရှိရေပေးဝေရေးနှင့်ရေနုတ်မြောင်းအတွက်သင့်တော်ပါသည်။
က MS 280-43 (က) X3
ဒေါ် : ဝတ်ဆင် centrifugal သတ္တုတွင်းစုပ်စက်
၂၈၀: စုပ်စက်၏ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်နေရာ၌စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတန်ဖိုး (m3 / h)
၄၃းစုပ်စက်၏ဒီဇိုင်းဆွဲထားသောနေရာတွင်အဆင့်တစ်ခုတည်းသော ဦး ခေါင်းတန်ဖိုး ())
၂။ ကျောက်ချစခန်းမှ pump body ကတည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိမှုအားလိုင်းဝန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၃။ Overload ဒီဇိုင်းမရှိ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်အောင်သေချာပါစေ။
ကွဲပြားခြားနားသောအလတ်စားအားဖြင့် 6. ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများသုံးပါ။
အစိုင်အခဲအမှုန်များမပါဘဲ၊ အပူချိန် ၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ရှိရေကိုအရည်ကိုအလွယ်တကူလွှဲပြောင်းပါ
ဘွိုင်လာရေအစာကျွေးခြင်း (သို့) ရေပူနှင့်အလားတူအလတ်စားများကိုအစိုင်အခဲအမှုန်များမပါဘဲအပူချိန် ၁၀၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်သင့်လျော်သည်။ စတီး၊ သတ္တုတွင်း၊ မိလ္လာလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သင့်လျော်သည်။
၁.၅% အောက်သို့မဟုတ်အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အတူသတ္တုတွင်းရေကို ၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်သို့လွှဲပြောင်းပါ
အစိုင်အခဲလက်တွေ့ကျသော၊ အပူချိန် -20 ° C မှ ၁၀၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားမလိုဘဲတဖြည်းဖြည်းစားစားနိုင်သောအရည်ကိုလွှဲပြောင်းရန်အတွက်သင့်တော်သည်
ခိုင်မာသောလက်တွေ့ကျစရာမလိုဘဲရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းရန်သင့်လျော်သည်၊ အပူချိန် -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, 120cSt အောက်ရှိအတွင်းရှိအပူချိန်။
ဘာကြောင့် TKFLO Pump တွေရွေးချယ်တာလဲ
♦ အကောက်ခွန်တောင်းဆိုမှုများ & ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပရီမီယံ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ သုံးစွဲသူ၏စိတ်ကျေနပ်မှုသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကိုတိုင်းတာရန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့် Forever technique ၀ န်ဆောင်မှု။
ရှည်လျားသောနည်းပညာ - ယုတ္တိတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့အတွက်ပါရဂူဘွဲ့ဆရာနှစ် ဦး၊ ပါမောက္ခတစ် ဦး၊ အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ ၅ ဦး နှင့်အင်ဂျင်နီယာ ၂၀ ကျော်အပါအဝင်နည်းပညာအဖွဲ့၏စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံရှိရန်နှင့်သင့်အားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများနှင့်ကောင်းမွန်သောနောက်ဆက်တွဲများကိုပေးအပ်ရန်တို့ပါဝင်သည်။ အရောင်းဝန်ဆောင်မှု
အရည်အသွေးမြင့်သတ္တုများပုံသွန်းများအတွက်အရည်အသွေးပေးသွင်း; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျော်ကြားသောနိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းအမှတ်တံဆိပ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ bearing, motor, control panel နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ။ WEG / ABB / SIMENS / CUMMININS / VOLVO / PERKIN နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ...
ထုတ်လုပ်သူသည် ISO9001: 2015 အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် 6S စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်လိုအပ်သောအရည်အသွေးတင်ဒါများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသင်သေချာကောင်းပြောနိုင်မည်။ ပစ္စည်းအစီရင်ခံစာ, စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ ... နှင့်တတိယပါတီစစ်ဆေးခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
♦ Pre- အရောင်းဝန်ဆောင်မှု
- စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်အကြံပေးထောက်ခံမှု။ ၁၅ နှစ်ကြာနည်းပညာဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုစုပ်ယူ။ ။ တစ် ဦး သို့တစ် ဦး အရောင်းအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှု။ ။ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၂၄ နာရီအတွင်းရရှိနိုင်သည်။
- နည်းပညာလေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းကိရိယာအကဲဖြတ်; - Troubleshoot တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် debugging; - ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းမွမ်းမံခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်း - တစ်နှစ်အာမခံ။ ထုတ်ကုန်များ၏တစ်သက်တာအခမဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးပါ။ - ဖောက်သည်များနှင့်တစ်သက်တာအဆက်အသွယ်ရှိပါက၊ ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အကြံဥာဏ်များရယူပါ။
ရှေ့သို့ ANS (V) စီးရီးနှစ်ထပ်စုပ်ယူမှုခွဲထုတ်ကာစ Centrifugal Pump
နောက်တစ်ခု: API610 ANSI ဓာတုဖြစ်စဉ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရေနံဓာတုအကြီးစားရေနံစိမ်းဆီလွှဲ
အချင်း DN 80-250 မီလီမီတာ
စွမ်းရည် 25-500 m3 / h
ဦး ခေါင်း 60-1798m
အရည်အပူချိန် 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော double-suction impeller ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်းသည် axial အားအနည်းဆုံးသို့လျှော့ချပေးပြီးဓါးပုံစံဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိသည်။ ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်သိသာစွမ်းဆောင်ရည်ငွေ့ချေးကိုခံနိုင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောထိရောက်မှုရှိသည်။
၆ ။ Flange စံ - သင်၏လိုအပ်ချက်များအရ GB, HG, DIN, ANSI standard ။
ပစ္စည်း ရေသန့် ရေသောက်ပါ မိလ္လာရေ ရေပူ ပင်လယ်ရေ
အဖုံးနှင့်အဖုံး သံ HT250 ချပစ် SS304 ပျော့သံ QT500 ကာဗွန်သံမဏိ duplex အက်စ်အက်စ် 2205 / ကြေး / SS316L
Impeller သံ HT250 ချပစ် SS304 ပျော့သံ QT500 2Cr13 duplex အက်စ်အက်စ် 2205 / ကြေး / SS316L
လက်စွပ်ဝတ်ဆင် သံ HT250 ချပစ် SS304 ပျော့သံ QT500 2Cr13 duplex အက်စ်အက်စ် 2205 / ကြေး / SS316L
ရိုး SS420 SS420 40Cr 40Cr duplex အက်စ်အက်စ် 2205
ရိုးလက် ကာဗွန်သံမဏိ / အက်စ်အက်စ် SS304 SS304 SS304 duplex အက်စ်အက်စ် 2205 / ကြေး / SS316L
မှတ်ချက် - အသေးစိတ်အချက်အလက်စာရင်းသည်အရည်နှင့်ဆိုက်အခြေအနေများအရဖော်ပြလိမ့်မည်
အမိန့်မှာတင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်တဲ့ parameters တွေကို.
၁။ Pump model နှင့်စီးဆင်းမှု၊ ဦး ခေါင်း (စနစ်ဆုံးရှုံးမှုအပါအ ၀ င်)၊ NPSHr ကိုလိုချင်သောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ၏အမှတ်အသားတွင်။
2. ရိုးတံတံဆိပျအမျိုးအစား (စက်မှုသို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးတံဆိပျဖြစ်စေသတိပြုရမည်ဖြစ်သည်နှင့်မပါလျှင်, စက်မှုတံဆိပျကိုဖွဲ့စည်းပုံ၏ပေးပို့လိမ့်မည်) ။
၃။ စုပ်စက်၏ရွေ့လျားမှု ဦး တည်ချက် (CCW တပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင်သတိပြုရမည်။ အကယ်၍ မဟုတ်လျှင်၊ နာရီလက်တံတပ်ဆင်မှုဖြန့်ဝေခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ )
4. မော်တာ၏ Parameter များ (IP44 ၏ Y series motor အားယေဘုယျအားဖြင့် 200KW ပါ ၀ င်သော low-voltage motor အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောဗို့အားတစ်ခုကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်း၏ဗို့အား၊ အကာအကွယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ , ပါဝါ, polarity ကနှင့်ထုတ်လုပ်သူအရေအတွက်) ။
5. စုပ်စက်ထည်, impeller, ရိုးတံစသည်တို့အစိတ်အပိုင်းများ၏ပစ္စည်းများ။ (စံသတ်မှတ်ချက်ခွဲဝေမှုနှင့်အတူပေးပို့ခြင်းကိုသတိပြုမိခြင်းမရှိဘဲလျှင်လုပ်လိမ့်မည်) ။
6. အလယ်အလတ်အပူချိန် (စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်အလတ်စားအပေါ်သို့ပေးပို့ခြင်းကိုသတိမပြုမိလျှင်လုပ်လိမ့်မည်) ။
Q1 ။ မင်းထုတ်လုပ်သူလား
ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၅ နှစ်ကျော်ပန့်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြည်ပစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
Q2 ။ မင်းရဲ့ပန့်တွေကဘယ်စျေးတွေကိုတင်ပို့သလဲ။
အရှေ့တောင်အာရှ၊ ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိက၊ အာဖရိက၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်သောနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်ရှိသည့်ဒေသများ။
Q3 ။ ငါကိုးကားချင်လျှင်အဘယ်သတင်းအချက်အလက်သင်သိသင့်သလဲ
ခေါင်းစဉ်၊ အလတ်စား၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေ၊ အရေအတွက်စသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သင်၏ပေးသလောက်၊ တိကျမှုနှင့်တိကျသောမော်ဒယ်ရွေးချယ်မှုတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Q4 ။ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုစုပ်စက်ပေါ်မှာ print ထုတ်လို့ရလား။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအဖြစ်လုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်။ Q5 ။ မင်းရဲ့စုပ်စက်ရဲ့စျေးနှုန်းကိုငါဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ အောက်ပါဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်နိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည် ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
အဆောက်အအုံမြင့်မားသောရေပေးဝေရေးစနစ်၊ မီးသတ်စနစ်၊ ရေကုလားကာအောက်တွင်အလိုအလျောက်ရေဖြန်းခြင်း၊ အကွာအဝေးရှည်သောရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ရေလည်ပတ်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသောစက်ကိရိယာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။
ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဖျော်ဖြေရေးအအေးနှင့်လေအေးပေးစက်သုံးရေ
Boosters စနစ်များ၊ ဘွိုင်လာကိုရေနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့တိုက်ကျွေး; အပူနှင့်လေအေးပေးစက်
ဆည်မြောင်း; ဖြန့်ဝေ စက်မှုလုပ်ငန်း; မီးသတ်စနစ်များ၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ။
ကျောက်မီးသွေးသုံးစွဲသူအတွက်အသုံးပြုသည့် pump 200MS အမျိုးအစား